ငါးထောင်တန်အတု ၊ တစ်သောင်းတန်အတုတွေမှာ ဘာလက္ခဏာတွေရှိလဲ? - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / ငါးထောင်တန်အတု ၊ တစ်သောင်းတန်အတုတွေမှာ ဘာလက္ခဏာတွေရှိလဲ?
ငါးထောင်တန်အတု ၊ တစ်သောင်းတန်အတုတွေမှာ ဘာလက္ခဏာတွေရှိလဲ?
Apann Pyay 12:20 PM ဗဟုသုတအစုံ Edit
ကျတော်တို့ပိုက်ဆံအတုအစစ်ဘယ်လိုခွဲကြမလဲ။Bank Staffတော်တော်များများသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။မသိသေးတဲ့ Bank Staff တွေလည်းအများကြီးပါ။(အတုအစစ်ခွဲတဲ့ စက်တွေကြောင့် နောက်ပိုင်းBank Staffတွေမသိကြတာလို့ထင်ပါတယ်)လုပ်သက်အတွေ့အကြုံအပေါ်မှာမူတည်ပြီးပညာတစ်ခုအနေနဲ့သိလာကြတာပါ။ကျတော် Bank Staffလို့သုံးပါတယ်။Banker လို့မသုံးပါ။(ကြိုစကားပုလ္လင်ခံထားပါတယ်။)ထားပါ။
(မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်တဲ့ အရောင်ပြောင်းတဲ့မှင် ပါတယ်)
ဒါဆိုအတုကရော။(ပြောင်းပြန်ပေါ့)ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့အချက်တွေကLED မီးတို့။Microscopeတို့နဲ့ကြည့်မှမြင်နိုင်တာပါ။သာမန် မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့ အရာတွေပါ။ဒီတော့ဘယ်ဟာအတု ဘယ်ဟာအစစ် လွယ်လွယ်ကူကူမှတ်လို့မရနိုင်ပါဖူး။
4.လုံခြုံရေးကြိုးပါတယ်။ ကြိုးပေါ်တွင်လည်းစာပါပါတယ်။ အလင်းရောင်မှာလှုပ်ရမ်းကြည်ရင် ခရမ်းတစ်ရောင်တည်းပါ။ (အစစ်တွင် ၄င်းလုံခြုံရေးကြိုးကိုလှုပ်ကြည့်ရင် အဝါနဲ့ ခရမ်းရောင်ပြေးနေပါတယ်)
5.၁၀၀၀၀ စာလုံးထဲနှင့် ဘေးအပြာနေရာရှိအကွက်လေးများဆေးသားမပြတ်သားပါ။(အစစ်တွင်ဆေးသားပြတ်သားပါတယ်)
2.ငွေစက္ကူရဲ့ ဘယ်ဘက်ထောင့်အလယ်မှာ CBMရေစာမပါပါဖူး။(အစစ်မှာ ပါ ပါတယ်)
4.ငွေစက္ကူရဲ့ ညာဖက်ထောင့်အလယ်မှာ ဆင်ပုံ ရေစာမပါ ပါဖူး(အစစ်မှာပါပါတယ်)
ဆင်ပုံရေစာသည် နောက်ပိုင်ထွက်သော ငွေစက္ကူအသစ်တွင် မျက်နှာချင်းဆိုင်လှည့်သည်။
မည်သူမဆို ငွေစက္ကူုကို ဖြစ်စေ၊ ဘဏ်ငွေလက်မှတ်ကို ဖြစ်စေ လိမ်လည် အတုပြုလျင်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အတုပြုမှန်း မိမိသိလျက် နှင့် ထိုသို့ လိမ်လည် အတုပြုလုပ်သည့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်တွင် အဆင့်တစ်ခုခုကို ပါဝင်ပြုလုပ်ပါက ထိုသူအား ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၄၈၉(က)အရ ထောင်ဒဏ် တစ်သက် တစ်ကျွန်းကိုဖြစ်စေ၊ ဆယ်နှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ကိုဖြစ်စေ တစ်မျိုးမျိုး ကိုဖြစ်စေ ချမှတ်အရေးယူနိုင်သည့် အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်ပါတယ်။
အခု ကျတော်တင်ပေးထားတဲ့ ပုံတွေက ပိုက်ဆံ အစစ်ပုံတွေပါ။(အပေါ်က ပုဒ်မတွေကြောက်တဲ့အတွက် အစစ်ပုံသာ တင်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ် )